तीजको उत्ताउलो सुरु भयो
बाशुदेव वाग्ले -
तीज हिन्दु नारीको महान चाड हो । तीज मनाउनु पर्छ । तर हुनेखानेले, सक्नेले उत्ताउलो पाराले नहुनेलाई गिज्याउने गरी तीजको रौनक सुरु भएको छ । तीजको महत्वलाई कम गर्ने गिज्याउने तरिकाले तीज मनाउन रोक्ने जिम्मा कसको ?
एकथरि सकेसम्म थोरै लगाउने र धेरै देखाउन व्यस्त छन् । अर्कोथरि तीजका गीत भनेर समाजको हेर्ने दृष्टिकोणलाई नै बदनाम गरिरहेका छन्, फेरि अर्कोथरि तीजको भोज भनेर दिनदिनै भोज भत्तेर र उत्ताउलो नाचगाना गर्न थालेका छन् । सभ्य, भव्य तरिकाले तीज मनाउनु पर्छ भनेर सहीमार्ग देखाउने कोही भएनन् ।
तीजका गीतहरु भनेर धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । गीतहरु सार्वजनिक हुनु राम्रो हो तर गीतका दृश्यहरु, नाचका उत्ताउला ताल र चालहरुले समाजलाई बिकृतितिर डो¥याएका छन् । गीतका बोल पश्चिमा खुल्ला सेक्स अपिलमा आधारित देखिन्छन् भने नाच पनि पश्चिमा लुकाउनुपर्ने अङ्गहरु पनि देखाउने बढी छ । लाग्छ, तीज मुम्बईबाट हलिउड फिल्मी गानातिर बढी आकर्षित भएका छन् ।
यसरी तीजको गरिमा र महिमा कायम हुनसक्दैन । तीज महिलाहरुको आमाछोरी, दाजुबहिनी, बाबुछोरी, आफन्त नातेदारहरुवीचको दुःखसुख बा“ड्ने संस्कृतिलाई नाङ्गो संस्कारको पोखरीमा लगेर चुर्लुम्मै डुबाएजस्तो भइसक्यो । अझै पनि तीजको महत्व झल्काउने बारेमा संस्कृतिविदहरु सोचिरहेका छैनन् ।
समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक बिकृति माथी ब्यङ्य प्रहार गर्नुपर्नेमा बिकृति बढाउने तीजलाई हामीले कहिलेसम्म बढावा दिइरहने हो ? तीज भनेको कट्टु देखाउने, छाती खोलेर सेक्स अपिल गर्ने महिलाको चाडबाड हो र भनेको ?